အင်တာနက် သုံးဖို့အကောင်းဆုံး Browser များ -
အရင်ခေတ်လုပ်ငန်းတွေမှာ စာရွက်စာတန်းတွေကို အသုံးပြုပြီး စာရင်းတွေသိမ်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မှတ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ လက်ရှိတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်မှာတော့ ဒီလိုကိစ္စတွေကို Computer တွေထဲရဲ့ Storage ထဲမှာထိမ်းသိမ်းလာကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အင်တာနက်ရှိရုံနဲ့ အလွယ်တကူ Data တွေကို ရှာနိုင်၊ သိမ်းနိုင်လာကြတဲ့ Online Drive (ဥပမာ – Google Drive) တွေထဲမှာသိမ်း အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။ ဒီလို အင်တာနက်ပေါ်မှာ လေ့လာမှုတွေ ရှာဖွေမှုတွေ သိမ်းဆည်းမှုတွေ လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ Browser တွေကိုအသုံးပြုဖို့လို့အပ်ပါတယ်။ Computer တွေမှာ Default Browser တွေပါဝင်ပေးမယ့် Web Browsing မြန်မြန်လုပ်နိုင်ဖို့နဲ့ အင်တာနက်သုံးနေစဥ် ကိုယ့်ရဲ့ Data တွေကို စိတ်ချလုံခြုံရဖို့အတွက် Security ကောင်းတဲ့ Browser တွေကို အသုံးပြုတတ်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ မိတ်ဆွေတို့တွေ အင်တာနက်သုံးတဲ့ အခါမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်စေမယ့် Browser တွေကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်…
အင်တာနက်သုံးတဲ့လူတိုင်းနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသား Browser တစ်ခုလိုပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီ Mozilla Firefox က Website နဲ့ Full Loading Pages ကျလာတာ အမြန်ဆုံး Browser တစ်ခုလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ Data လုံခြုံမှုအပိုင်းမှာ Secure ဖြစ်ပြီး PC အတွက် macOS နဲ့ Windows OS တို့မှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Smartphone နဲ့ Tablet တွေအတွက်မှာတော့ Android OS နဲ့ iOS တို့မှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Private Web Browser ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီ Browser ရဲ့ အားနည်းချက်ကို ရှာပြီး ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Bookmarked Page တွေကိုရှာဖွေရခက်တာနဲ့ Landing Page မှာ ကြော်ငြာတွေ များနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Browser ကလည်း Mozilla Firefox လိုပဲ လူသိများတဲ့ Browser တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Google App တွေဖြစ်တဲ့ Google Drive, Google Photos, Google Map, Google Calendar အစရှိတဲ့ Feature တွေကို အသုံးပြုရတာ အကောင်းဆုံး Browser ဖြစ်ပါတယ်။ Android Smartphone တွေအတွက် ပိုအသုံးပြုသင့်တဲ့ Browser တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Google Play Store, Google Play တို့အတွက် ချိတ်ဆက်ရလွယ်ကူပြီး Windows OS နဲ့ macOS တွေအတွက် ရွေးချယ်ပြီး အသုံးပြုလို့ ကောင်းတဲ့ Browser တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Chrome Browser ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ Multiple Devices တွေမှလည်း ကိုယ့်ရဲ့ Google Account ကိုချိတ်ဆက်ထားမယ့် နေရာမရွေး အချိန်မရွေး အင်တာနက်ရှိရုံနဲ့ ကိုယ့်အသုံးပြုချင်တဲ့ Device မှာအသုံးပြုသွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Chrome ရဲ့အားနည်းချက်ကို ရှာပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် Chrome Desktop Version မှာ Browsing Speed အနည်းငယ်နှေးတာရယ်၊ Program File တွေကအနည်းငယ်ကြီးပြီး အခြား Browser တွေထက် System Resource ပိုပြီး အသုံးပြုတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Browser ကတော့ နောက်ပိုင်းထွက် Windows 10 Operating System မှာပါဝင်တဲ့ Browser တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီ Browser ကို Mobile Version အနေနဲ့လည်းထွက်ရှိပြီး Android OS နဲ့ iOS တို့မှာလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Microsoft Edge ကအရင် Old Version Windows တွေမှာပါတဲ့ Default Browser ဖြစ်တဲ့ Internet Explorer ထက် Speed ပိုမြန်တဲ့ Browser တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Microsoft Edge ရဲ့ UI(User Interface) ကို Default အနေနဲ့ဆိုရင် Microsoft News တွေကို တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပြီး၊ မမြင်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ Setting ထဲမှာ “Hide my news feed” ဆိုတာကို အမှန်ခြစ်ပြီး Save လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီ Browser က Windows 10 Operating System နောက်ပိုင်း Version တွေအတွက် အသုံးပြုလို့ကောင်းတဲ့ Browser တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Opera Browser ကတော့ Chrome Browser နဲ့နည်းနည်းတူတဲ့ Browser တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် တူညီတဲ့ Program တွေကိုအခြေခံပြီး အသုံးပြုထားလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Opera က အသုံးပြုရတာကောင်းတဲ့ Browser တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာရှိတဲ့ Unique ဖြစ်တဲ့အချက်တွေကတော့ Side Bar မှာ သင့်ရဲ့ Favorite Website Link တွေကို Pin လုပ်ထားနိုင်ခြင်း၊ Bookmark တွေလို Sort လုပ်ထားနိုင်ခြင်းနဲ့ Email, Chat Windows တွေဆီသို့ Shortcut လုပ်ထားနိုင်ခြင်း တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Windows OS, macOS, Android OS နဲ့ iOS တွေမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အထက်ပါ Browser တွေကတော့ အင်တာနက် အသုံးပြုသူတွေရဲ့ Computer/Smartphone တွေထဲမှာ ရှိတတ်တဲ့ Browser တွေဖြစ်ပြီး အကောင်းဆုံး Browser တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့လည်း ကိုယ့်အသုံးပြုရတာ ကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့ Browser တွေရှိရင်လည်း ပြန်လည် ဝေမျှသွားနိုင်ပါတယ်။
Posted by Min Thuta/ Tuesday December 17th, 2019/ Blog/2Comments
So thank , best regards.
Wednesday February 5th, 2020 - 05:18 PM/ Reply
Zaw Lucky star
That is good, so thank , kind regards.
Wednesday March 4th, 2020 - 08:43 AM/ Reply